Dhiigni dhangala’e fi lubbuun harcaate galaana tahee diina fuudha - Oromia Shall be Free
Ayyaan Irreechaa 10, 2016 Haroo Arsadee bushooftuutti bara baraan tahu, Aayyaan Africaa keessaa guddichaa fi
sadarkaa addunyaattiis lakkooysa nama Miiliyoona hedduu hirmaachisuun beekamuudha. Kan bara 2016 kuni ammoo
dirree murriqii ilmaan Oromoo idda takkatte tahee ummata Oromoo fi ummata dhala namaaf naatota addunyaa hunda
biratti guyyaa dukkanawaa tahee jira.
Aayyaanni arraa kuni kan durii caalaa Oromoota miliyoonata hedduu hirmaachise, Bushooftuun yoo xirracha darban lafa
hin bu’u. Humni Faashiftiin TPLF/wayyaaneen ummata sirbaa fi dhiichisaan gidiraa, gadadoo, hidhaa fi ajjeechaa dhala
Oromoo irratti ji’oota 11 darbe kana tahaa turte anaanataa, yeroo Haroo Arsadee itti deeman Rabbii ifii kadhachaa uffata
aadaa fi caffee qofa qabatee ayyaanichaaf bahe loltuu lafaa fi xayyuura/hilicopter sammiirran rasaasa itti roobse akka
baala mukaa lubbuu dhibba hedduu murruq godhee jira.
Warraa fi Maatiin tiruun biruqxe, Saba guutuutti guyyaa dukkanaa tahe, Ilmi, Intalti,Abbaan yokaan Haati teessan
wareega ulfaataa kabajaa Biyyaa fi Sabatiif wareegaman. Jabaadhaa, gumaa baafna malee hin nyaannu. Wareegni, Lafee
fi dhiigni haga firii xaafii osoo hin hafne kafallanna. Kumaantamaan dhiiga dhiigaan baasuuf tarree galee jira. Onnee
keessaan rabbiin jajjabina isiinii haa kennu, Abbaa keenya, Ilma keenya, Intala teenya fi Haadha teenya ulfina
Rabbin/waaqa biratti wareegamtoonni Saba fi biyyaaf of kennan qaban rabbiin haa badhasu.
gatii bilisummaan gaafattu Sabni keenya kafalaa jiru harka duwwaa duguuggaa shanyummaa Saba keenya irratti tahaa
jirtu laallee garra, guyyaan dirqama Sabummaa bahunnu, kan wareega sadarkaa kamiittuu kafallu amma dirmachuuf
Guyyaan maqaan qabsaawummaa fi Jaarmayummaa itti salphatuu fi itti kabajaa Saba Oromoo biratti argatu yeroon
geesse. Lubbuu Saba keenya guyyaa kabajamaa irratti, Oromiyaa irratti murriqiin bu’aa jirtu gaafii qabsaawaa dhugaa,
kan waan jedhe hujjitti hiiku, Kan lubbuu ifii Sabaaf rakoo godhu, kan irbuu seene itti dhugoomsu gahee jira. Guyaan
dhiiga ilkee liqimsanii irbuu Sabaaf seename guutamee, gochaan muldhifamu amma. Humnaa fi beekumsa moora
mooraa jiru mara qindeessuun qabsoo Sabni Oromo daraarse firiif wareega baasa jiru kanaaf gummaacha Sabummaa
akka baanu dhaamna. Kuni ammoo, boodaa miti amma, Boruu mitiis arra.
Previous FRONT FOR INDEPENDENCE OF OROMIA (FIO)
Next Australia urged to stop Rwanda-style genocide in Ethiopia